सिधा रुख नै चाँडो काटिन्छन् «
नेपालीमा एउटा उखान छ– सिधा रुख नै धेरै काटिन्छन् । अहिले मुलुकमा पनि त्यस्तै अवस्था आइपरेको छ । हुनेखाने, ठूलाबडाहरुलाई सबैतिर ऐसआराम छ । कुनै गल्ती गर्दा पनि गल्ती नै नगरेको भनेर पन्छिन खोज्छन् । अनि सिधासाधा चाहिँ सधैं चपेटामा नै परिरहने । जो आर्थिक रुपमा कमजोर छ, उसैलाई मात्र हेप्ने ।
समाजभित्र राम्रा, नराम्रा सबैखाले आचरण भएका मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । तर के समाजमा बस्ने सबै मानिसहरु राम्रा मात्रै छन् त ? पक्का छैनन् । तपाईंले हरेक राम्रा कामहरु गर्दै जानुहोस् तर तपाईंको खुट्टा तान्ने मानिसहरु तपाईंको वरिपरि प्रशस्तै लागिरहेका हुन्छन् । यतिसम्म कि धेरै नै मानिसहरुले राम्रोको भन्दा पनि नराम्रो कामको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने सरोकारवालाहरु समेतले नेतृत्वमा खिचातानी गर्ने गर्दछन् । उदाहरणको लागि नेपालीको ढुकढुकी रहेको र मुलुकलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लाने कुलमान घिसिङ नेपालीले सर्वाधिक रुचाएका सवैको मनमा बस्न सफल एक उदाहरणीय व्यक्ति थिए । तर सबैले उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने धेरै तर्फबाट आवाज आए पनि सरकारले उनलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न सकेन । यसको अर्थ हुन्छ, जंगलमा सोझा र सिधा रुख चाँडै काटिन्छन् । बाँकी रहेका बाँगाटिङ्गा रुखहरुले भने जंगलमा राज गर्दछन् । अर्को पनि उदाहरण छ । बर्दियाबाट चुनाव हारेका बामदेव गौतम अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन् । यो जनताको मतको अपमान हो । के राष्ट्रिय सभामा जान अरु कोही चुनाव जितेका सक्षम व्यक्ति थिएनन् ?
राजनीतिक सहमतिको आधार मान्ने हो भने गौतमबाहेक प्रतिपक्ष दलका पनि त कोही सक्षम प्रतिनिधि होलान् राष्ट्रिय सभामा जान । यही नै छ फरक । यदि सरकारले कुलमान घिसिङको राम्रो काम गरेको देख्दा पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्दैन भने गौतमलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजानु भनेको सरकारले गरेको गलत निर्णय र राजनीतिक पार्टीबीचको चलखेल रहेको सर्वसाधारणको ठम्याइ रहेको छ ।
राजनीतिक तवरबाट नै यस्ता निर्णयहरु हुन्छन् भने राज्यको हरेक तहमा पनि यस्तैयस्तै तरिकाको निर्णयहरु गर्न बाध्य हुन्छन् कर्मचारी । तर जे भए पनि मानिसहरुले जतिसुकै वर्णन गरेपनि जो टाठोबाठो छ, जो गलत आचरण भएको छ। उसैको दिन बल्दो रहेछ । तर सोझा मानिसहरु आर्थिक रुपमा पनि कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका मानिसहरुले सधैं तल्लो नजरमा राख्ने, होच्याउने, गिराउने मात्र नभएर समाजबाट पनि अपहेलित गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु हामी देख्न सक्छौं । यसको अन्त्य तबसम्म हुँदैन, जबसम्म राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य हुन सक्दैन । त्यसैले काम गर्नुपूर्व सवैतिर विचार पु¥याएर मात्र गर्नुपर्दछ । एकल स्वार्थ र मोहले गर्दा नराम्रो मूल्य चुकाउने बाहेक अरु कुनै विकल्प रहँदैन । त्यसैले सिधा रुख पाएमात्र काटिहाल्ने होइन, काट्नु पूर्व धेरैतिर बिचार पु-याउनु जरुरी हुन्छ ।